Ciidamada AMISOM oo markii ugu horeysay fariisin cusub ka sameystay Laanta Buuro
Ciidamada AMISOM oo markii ugu horeysay fariisin cusub ka sameystay Laanta Buuro.
Cutubyo ka tirsan Ciidamada AMISOM ayaa markii ugu horeysay fariisin cusub ka sameystay xerada Laanta-buuro ee gobolka Shabeellada hoose oo ay dhowaan ka qabsadeen Ururka Al-shabaab kaddib dagaallo muddo kooban socday.
Saldhigga xerada Laanta Buuro oo horay u ahaa fariisinka ugu weyn ee maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa iminka waxaa si rasmi ah u degay ciidamada AMISOM oo ku sii siqaya KM 50 iyo degmooyin kale oo ka tirsan gobolka Sh/hoose.
Cutubyo ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa markii ay halkaasi degayeen waxaa xerada dhexdeeda yiilay meydadka horjoogayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo ciidamada AMISOM ay god u qodeen dabadeedna ku aaseen.
Qaar ka mid ah saraakiisha hoggaaminaya AMISOM ayaa sheegay in howgallada ay ka wadaan gobolka Sh/hoose ay sii wadayaan ilaa inta ay taako ka mid ah ka maqan tahay, iyagoona ugu baaqay maleeshiyaadka weli ku harsan Al-Shabaab inay isaga soo baxaan oo ay isugu soo dhiibaan ciidamada dowladda.